२० राजनैतिक दल द्वारा सरकार विरूद्ध आन्दाेलनकाे घाेषणा - Jillakhabar.com
२० राजनैतिक दल द्वारा सरकार विरूद्ध आन्दाेलनकाे घाेषणा
२५ अशोज २०७७,आइतवार
हाम्राेप्रयास । केपी वली नेतृत्वकाे वर्तमान सरकारकाे कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २० राजनैतिक दलहरूले कार्यगत एकता गरि सरकार विरूद्ध आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेका छन् । सङ्ठनको आसोज २४ गते सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएका तमाम प्रकारका राष्ट्रघात, जनघातबाट आक्रोशित नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएको पाइएको संगठनको ठहर छ । यसका निमित्त फेरि अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता पनि सर्वत्र महसुस भइरहेको संगठनको निष्कर्ष छ । यसका लागि संगठनले अगामी असोज २९ गते १ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रमा भएको समझदारी र स्थानीय समस्याहरुलाई समावेश गरी कार्यगत एकताको आह्वानमा स्थानीय स्तरमा पनि सङ्घर्ष अघि बढाउने सहमति गरिएको छ । बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै उक्त प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
२० राजनीतिक सङ्गठनहरुको कार्यगत एकतामा ने.क.पा. (माओवादी) लाई पनि समावेश गरिएको छ । अब यो २१ सङ्गठनको कार्यगत एकता बनेको छ ।
कार्यगत एकतामा आबद्ध सङ्गठनहरु नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्शेविक), राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, एम.सी.सी. खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र ने.क.पा. (माओवादी) रहेका छन् ।
Previous articleएकै दिन ५००० नयाँ संक्रमित थपिए, १४ जनाकाे मृत्यु
Next articleआइपीएलमा अनलाईन सट्टेबाजी गर्ने ६ जना कालिमाटीबाट पक्राउ
Breaking News: लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलकाे राजीनामा स्वीकृत
सांसद शाही प्रकरण: जनमाेर्चा भन्छ अस्पताल लगेर बन्दी बनाइयाे,शाही भन्छन् एक्कासी बेहाेस भएछु
जनमोर्चाका एक सांसद बेपत्ता, जीवन रक्षा गर्न जनमोर्चाको माग, गण्डकी प्रदेश सभा बैठक स्थगित
अनेमसंघ जैमिनीको हाँडिकोटमा प्रशिक्षण: महिलाको हक हितको सवाल उठ्नुपर्ने धारणा
धुम्बाराहीमा नेकपाको बोर्ड झिकेर एमालेको बोर्ड राखियो, यस अघिकाे नेकपा अब नेकपा रहेन
नेकपाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद कायमै रहने, अझै पनि एकीकरणको सम्भावना जीवित
Breaking News: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड र केपी दुवैकाे भएन,कट्टेलको पक्षमा फैसला
चन्द समूहका नेताकार्यकर्ता रिहाइ प्रक्रिया शुरु, १४४ नेता–कार्यकर्ता कारागारमा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्दै, प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठककाे तयारी
कुश्मिसेराबाट नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको गर्जन, “जे हो ? हामी नै हो”
कांग्रेस फकाउँदै दाहाल–नेपाल: सभापति देउवा संग छलफल, सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव